XOG LA OGAADAY: Xeer ilaaliyaha Qaranka oo xayiray Akoonka lacagaha ee Xafiiska Golaha Shacabka + SABABTA – War La Helaa Talo La Helaa
XOG LA OGAADAY: Xeer ilaaliyaha Qaranka oo xayiray Akoonka lacagaha ee Xafiiska Golaha Shacabka + SABABTA
By Xuseen Madoobe	 Last updated Feb 26, 2019
Illo lagu kalsoon karo oo ku dhow Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan ayaa inoo sheegay inuu masuq maasuq baahsan baahsan ka jiro xafiiska Guddoonka Golaha Shacabka.
Xeer ilaaliyaha Qaranka ayaa la sheegay inuu amar ku bixiyay in la xayiro Akoonka lacagta loogu shubo Golaha Shacabka ee lagu socodsiiyo shaqada Baarlamaanka (running Cost) si baaritaan loogu sameeyo masuq maasuq la sheegay inuu ka jiro hanaanka loo adeegsado lacagtaasi.
In ka badan 100,000-Kun (Boqol kun) oo dollar ayaa bishiiba ku baxda howla socodsiinta Baarlamaanka,sida xogta aan ku helnay,waxaana hadda naloo sheegay in lacagtaasi shaqsiyaad gaar ah jeebkooda ay ku dhacdo.
Xafiiska Xeer ilaaliyaha ayaa si gaar ah u baaraya Xoghayaha Guud ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariim Xaaji cabdi Buux iyo madax maaliyadda Golaha Shacabka,kuwaasi oo lagu tuhmayo iney dano gaar ah lacagtaasi loogu talagalay adeega Golaha shacabka u isticmaalaan.
Sida wararka aan ku helnay,Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan ayaa ka codsaday Xafiiska Xeer ilaaliyaha iney sii wataan baaritaankooda,balse ay u fasaxaan Akoonka si lacagaha howl socodsiinta hakad uga gelin.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa hadda fasax ku maqan,mana jirto wax shaqo ah oo hadda socda,marka laga reebo shaqaalaha raydika oo si maalinle ah howshooda u wata.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku waramaya iney xafiisyada Dowladda ka jiraan masuq maasuq iyo ku tagri-fal awoodeed,kuwaasi oo u baahan awood dheeri iyo madax banaani shaqo si waajoobadkooda looga guto.
Xukuumadda Xasan Cali Kheyre ayaa isku tirisa iney tahay mid si xooggan ula dagaalameysa masuq maasuq,balse waxaa muuqaneysa iney sii kordheyso mas’uuliyiinta ku tagri falaya awooda shacabka ay siiyeen.
SAWIRO: Shir u dhaxeeyo DF & M/goboleedyada oo ka furmay Muqdisho
Wararkii ugu danbeeyay Qarax Xooggan oo ka dhacay Muqdisho